Zonke iintlobo zezixhobo zasimahla kule webhusayithi intsha: FreebiesByPeople | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Imithombo, Iimpawu, Izibonelelo
FreebiesByPeople yiwebhusayithi elayishwe ngumxholo wasimahla ukonyusa irekhoda yethu kwaye ke sikwazi ukunika owona mgangatho uphezulu kubathengi bethu. Apha sinokufumana ii icon, iifonti, ii-ebook, imixholo kunye nokunye okuninzi.
Iwebsite ezinikeleyo kubaprogram kunye nabaqulunqi kwaye ukusuka kwiphaneli esecaleni lasekhohlo ungafikelela kwezona ndawo zibalulekileyo zesiza, ngelixa uvula iqhosha elibaluleke ngaphezu kokubalulekileyo: kuvunyelwe ukusetyenziswa kwentengiso; Singathanda ukuba usinikeze eli ziko kwezinye iisayithi.
Oko kukuthi, kwiiFreebiesByPeople unokufumana kwimithombo yolwazi, ii-icon, imixholo, izixhobo zekhonkco, Imixholo ye-HTML, iiplagi, ii-CSS snippets, ii-ebook, iimodeli ze3D, imixholo yeWordPress, iiapps zewebhu kunye nolunye uthotho lomxholo esiwucebisayo ukuba undwendwele.
Lilonke zizinto zonke ngaphezu kwezixhobo eziyi-1.000 XNUMX yasimahla ibandakanyiwe kwiindidi ezili-14 ezahlukeneyo kwaye ezilungelelaniswe ngokugqibeleleyo ukufumana loo ndlela yasimahla okanye yentengiso ukuze isetyenziswe emsebenzini wethu kubaxumi.
Kwiphepha ngalinye lezixhobo singalifumana iqhosha lokwenza lithandwe, uyikhuphele, wabelane ngayo kwaye uyizame kwidemo ephilayo. Inyani yile yokuba ibonelela ngezixhobo ezininzi ukufumana ezo zixhobo sizikhangeleyo ngendlela elula kakhulu.
Ngaphezulu sinako Umxholo weprimiyamu, vip kunye namahlakani xa sikubutyebi. Ikwabonisa wonke umxholo ukuze sifumane umbono ongcono wento esiza kuyikhuphela kwaye ngaloo ndlela sisebenzise yonke into.
Inyaniso leyo ukuba yiwebhusayithi esandula ukwenziwa Kucingelwe kakuhle kwaye kubonisa ukuba bayifundile yonke into ukubonelela ngamava omsebenzisi amahle. Siyincoma ukusuka apha, kunye ezi ezinye izibonelelo ngazo ukwandisa ikhathalogu yakho.
Lo iwebhu ixhaswe nguBantu kwaye bayazithengisa izixhobo zabo ukuba sifuna ukuya kwelinye inqanaba. Zama ukuba simahla kangakanani na ngaphandle kwezixhobo ezibalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu, iifonti, ii-ebook, imixholo kunye nokunye okuninzi simahla kwiFreebiesByPeople
IPhone 11 entsha kunye ne-iphone 11 Pro